Daawo Adigaa Yaabi Doonee? Taageerayaasha Liverpool Oo Qabsaday Dukaanka Barcelona Iyo Sawirada Lionel Messi Oo Lagu Dul Dabaal Degay. - Gool24.Net
Daawo Adigaa Yaabi Doonee? Taageerayaasha Liverpool Oo Qabsaday Dukaanka Barcelona Iyo Sawirada Lionel Messi Oo Lagu Dul Dabaal Degay.
Jamaahiirta kooxda Liverpool ee aduunka dacaladiisa ku nool ayaa samaynaya dabaal degyo waa wayn kadib markii ay 14 sanadood sugayeen koobka UEFA Champions league kaas oo ay markii lixaad ee taariikhda kooxooda hanteen.
Kubbada cagta aduunka ayay layaab ku noqotay wixii ay taageerayaasha Liverpool shalay iyo xalay ka sameeyeen England gaar ahaan magaalada Liverpool halkaas oo ay ku dhawaad hal milyan oo qof dariiqyada ugu soo baxeen baskii dusha ka furnaa ee koobka loogu dabaal degayay.
Jurgen Klopp ayaa ka mid ahaa dadkii amakaaga ka qaaday wixii ay taageerayaasha kooxdiisa Liverpool ka sameeyeen xafladayntii koobka Champions League wuxuuna sheegay in ay waayeen goob banaan oo ay joogsadaan.
Laakiin waxaa soo baxay muuqaal layaableh oo ay qayb ka mid ah taageerayaasha Liverpool ku qabsadeen Dukaanka kooxda Barcelona ee lagu iibiyo maaliyada iyo qalabka Sportska waxayna la tageen walxo laga sameeyay koobka Champions league.
Sida aad muuqaalka hoose ka arki karto taageerayaasha kooxda Liverpool oo sare u qaadaya calaamado loo eekaysiiyay koobka Champions league ayaa soo galay dukaanka Barcelona waxayna bilaabeen in ay heestooda caanka ah goobta cod dheer ugu qaadaan.
Kadib waxay bilaabeen in goobta uu sawirka Lionel Messi ku yaalo ay ugu dabaal degaan iyaga oo cod dheer ku heesaya.
Inkasta oo ayna taageerayaasha Liverpool wax dhibaato ah u gaysan dukaanka kooxda Barcelona, haddana waxay gabi ahaanba ka dhigeen goob ay heestooda sida ay doonaan ugu qaadeen isla markaana ay ugu dabaal degaan.
Qaar ka mid ah taageerayaasha goobtan soo galay ayaa ku labisnaa garmaan ay ku xardhan tahay fariintii uu Mohamed Salah la soo galay Anfield ee kulankii Barcelona oo uu dhaawac ku maqnaa taas oo ahayd: “Never Give Up” ama waligaa ha isdhiibin.
Kadib markii ay dhamaysteen dabaal degii iyo heestii waxay bilaabeen in ay goobta ka baxaan iyaga oo sii wata dabaal dega ay ku jireen.
Haddaba halkan ka daawo wixii ay qayb ka mid ah taageerayaasha Liverpool ku sameeyeen mid ka mid ah dukaanada kooxda Barcelona.
Ciyaartoyda Liverpool ee ka tirsan xulalka qaramada England iyo Holland ayaan heli doonin waqti ay ku nastaan waxayna hore ka bilaabanayaan diyaar garowga afar dhamaadka ee UEFA Nations League.